Warar — Biyo Guure News
Xasaasi:Madaxweynaha Kililka Oromia & Taliyaha Ciidanka Milateriga Itoobiya oo safar qarsoodi ah ku tegay Muqdisho
Ninkii la tartamayay Museveni oo sheegay in noloshiisa halis ku jirto
Kulan Qasriga Madaxtooyada ku dhexmaray M/weyne Muuse Biixi & Hogaanka 3-da Xisbi Qaran+Qaraarka Nuxurka ka soo baxay
Kongreska Mareykanka oo markale soo jeediyay xil ka qaadista Trump
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya Seyoum Mesfin oo la dilay+Cida dishay & Halka lagu dilay
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland oo Shir Jaraa,id qabtay muxuuse ka hadlay
Madaxweyne Muuse biixi Oo Xadhiga Ka Jaray Xafiisyo Cusub Oo Loo Dhisay
Madaxwayne Afikan ah oo 35 Xukunka Hayay oo diiday in uu xukunka ka dego
Madaxweynaha kilinka Oromia iyo taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay booqasho qarsoodi ah ku tageen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Shimelis Abdisa iyo Major General Berhanu Jula ayaa safar aan la shaacin oo qarsoodi ah ku tegay Muqdisho 15-kii bishan iyaga oo lagu waramayo iney kulan la […]
i Wine oo ah musharraxa mucaaradka Uganda ayaa sheegay in noloshiisa ay halis ku jirto kaddib doorashadii Khamistii...
Jan 17, 2021, 1:19 pm
Qaramada Midoobay ayaa Wefti culus u soo diraysa Caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. Wargeyska...
Jan 17, 2021, 1:06 pm
Jan 17, 2021, 1:26 pm
i Wine oo ah musharraxa mucaaradka Uganda ayaa sheegay in noloshiisa ay halis ku jirto kaddib doorashadii Khamistii ka dhacday dalkaas oo uu ku guuleystay Yoweri Museveni. “Waxaan u cabsi qabaa nolosheyda iyo tan xaaskeyga” ayuu yiri Bobi Wine. Wuxuu BBC-da u sheegay in uusan aqbali doonin natiijada kasoo baxday […]
Qaramada Midoobay ayaa Wefti culus u soo diraysa Caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. Wargeyska Geeska Afrika ayaa loo sheegay in Maalmaha soo socda ay Somaliland safar ku imanayaan Wefti ka socda Qaramada Midoobay, kuwaasi oo uu hoggaaminayo Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan, kaasi oo fadhigiisu yahay Magaalada […]
Hillary Clinton ayaa u ololeyneysa in la daawado muuqaal dukumintari ah oo laga sameeyay dilkii bishii October ee sanadkii 2018-kii loo geystay Jamaal Khaashuqji, oo ahaa wariye maqaallada ku qori jiray wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka. Mrs Clinton ayaa qof walba ugu baaqday in uu fiirsado filimkaas […]
Jan 14, 2021, 5:12 am
Aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa markale soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump kadib markii ay u codeyeen inta badan. Afhayeenka Kongreska, Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in markale aqalka ay hogaamiso uu soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump, waxaana xil […]
Jan 14, 2021, 5:04 am
Seyoum Mesfin ayaa sannado badan ahaa wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay dilka Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda dalkaas iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa xisbiga Tigray-ga ee TPLF. Howlgal ay fuliyeen milatariga ayaa lagu dilay afar hoggaamiye oo uu sidoo kale ku jiray nin magiciisa lagu […]
Jan 14, 2021, 4:59 am
Jan 13, 2021, 12:59 pm
Dadka Uganda ee ay da’doodu ka yar tahay 35 sano- waa in ka badan kala bar bulshada – ayaa keliya yaqaannay hal madaxweyne. Yoweri Museveni, oo xilka qabtay xilli kacdoon ciidan uu jiray sanadkii 1986, ayaa si cad uga soo horjeestay shuruucda siyaasadeed ee isku dheellitirka ee ay soo afjareen […]
Jan 11, 2021, 12:48 pm
Madaxweynihii hore Gobolka Tigray & ku-xigeenkiisii oo Gacanta lagu dhigay
Ciidamada Itoobiya ayaa sheegay iney gacanta ku soo dhigeen xubnihii ugu muhiimsanaa kooxda TPLF ee ka talin jiray gobolka Tigray. General Tasfaye Aylew oo ah madaxa Hawlgalka Ciidanka difaaca Itoobiya ayaa wakaalada wararka ee ENA u sheegay in gacanta lagu soo dhigay saraakiil sare oo ka tirsanaan jiray ciidanka kuwaasoo […]
Jan 11, 2021, 12:29 pm
Guddiga Doorashooyinka Oo Madaxweynaha U Gudbinaya Xilliga Ay U Muddeeyeen Qabashada Doorashooyinka Wakiillada & Deegaannada
Komiishanka doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa Maadaxweyne Muuse Biixi u gudbinaya Qoraal ay ku caddahay xilliga ay u qorsheeyeen inay qabtaan doorashada Goleyaasha Wakiillada iyo deegaannada ee isku sidkan. Ma jiro War Rasmiya oo ka soo baxay Guddiga doorashada, balse Ilo-wareedyo muhiim ah ayaa Wargeyska Geeska Afrika u sheegay in komiishanku […]
Jan 9, 2021, 12:33 pm
Twitter oo gabi ahaanba hawada ka saartay cinwaanka madaxweyne Trump
Shirkadda Twitter ayaa sheegtay inay hadda si rasmi ah meesha uga saartay cinwaanka Madaxweyne Trump. Barta Twitter ayaa sheegetay in go’aankan ay gaartay ka dib markii baaritaan lagu sameeyay qoralladadiisii ugu dambeeyay ee uu soo dhigo barta. Waxay Shirkadda sheegay in ay jiraan walaacyo laga qabo halis sii hurin karta […]
Jan 9, 2021, 11:39 am
Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyay in Joe Biden iyo Kamala Harris ay kala yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xiga ee dalka Mareykanka. Natiijada doorashada ayaa waxaa ansixiyay labada aqal ee Aqalka Sare iyo Aqalka Wakiillada, kuwaasoo laalay diidmadii laga muujiyay codadka gobollada Pennsylvania iyo Arizona. Kulankii caadiga ahaa ee Kongareeska […]
Jan 7, 2021, 12:15 pm
Axmed siciid oo kamid ahaa wariyayaashii ka hawlgali jiray idaacad bbcda ayaa kawaramay taariikh nololeedkii Alle ha ,unxariistee Marxuum Wariye Axmed cabdi Nuur oo ku geeriyooday magaalada London ee cariga ingiriiska
Jan 7, 2021, 12:10 pm
1 2 3 … 441 Next →